Mesh Mashiinka, Bar Mesh Qaloocan, silig bir ah - Shirkadda Meijiahua
Tuuboyinka Birta & Tuubo
Silig bir ah
Boolal Taxane ah
Gariiradda Steel & Sheet
WAANU SOO BANDHIGNAA TAYO SARE
Tianjin Meijiahua Steel waa koox ka mid ah hay'adaha dhaqaalaha caalamiga ah, oo ay ku jiraan shirkad gacansaar la leh. Soo-saar: TIANJIN TIANKANG BIRTA SOO SAARKA CO., LTD, TIANJIN TONGFU METAL PRODUCT CO., LTD. Shirkadda dhoofinta dhoofinta: Tianjin Meijiahua Trade CO., LTD. Shirkadda HK: Meijiahua Trade CO., LIMITED. Birta shirkadda Meijiahua waxaa la aasaasay 1999, waxay ka mid ahayd kooxda soo saaraha cilmi baarista & horumarinta WIRE, MESH, PIPE, SCREW ee Shiinaha. Waxaan leenahay labaatan xariiq oo wax soo saar.
Daminta dusha sare ee alxanka leh iyo daaweynta kuleylka ee temper waxaa badanaa lagu sameeyaa kuleylka kuleylka
Qiyaasta dusha sare ee tuubbada alxanka leh iyo daaweynta kuleylka ee kulul ayaa badanaa lagu sameeyaa kuleylka kuleylka ama kuleylka ololka. Xuduudaha farsamo ee ugu muhiimsan waa adkaanta dusha sare, adkaanta deegaanka iyo qoto dheer lakab adag. Tijaabada adkaanta waxay adeegsan kartaa tijaabiyaha adkaanta Vickers, sidoo kale wey isticmaali kartaa Rockwell ...
War wanaagsan! Shirkadda lambarka 3 ee xarigga siligga ayaa si guul leh loo hawlgeliyey!
Bishii Abriil 30, 2018, dhowr bilood oo khalad ah ka dib, shirkadda cusub ee la soo iibsaday mechine siligga 3 ayaa si guul leh loo hawlgeliyay, madaxweynaha shirkadda madaxda kale waxay ka qaybqaateen soo saarista qaybta ugu horreysa ee mesh silig. Qalabka waxaa loo isticmaali karaa tayo sare ...
Macaamiilkii ka yimid Australia, Singapore, Thailand wuxuu u yimid warshaddeenna baaritaan labo maalmood ah iyo booqasho.
Macaamiilkii ka yimid Australia, Singapore, Thailand wuxuu u yimid warshaddeenna baaritaan labo maalmood ah iyo booqasho. Waxay diiradda saareen fiilada birta ah ee birta ah ee 1x61mm, ∮42mm, Intii lagu guda jiray baaritaanka, macaamiisha ayaa booqday aagga wax soo saarka waxayna daawadeen habka wax soo saarka ee wasakhda ...
Aaga Warshadaha Tuanbo, Degmada Jinghai, Tianjin, Shiinaha